NK | हेमराजको हत्यामा माओवादी लडाकुको हात, नौ वर्ष पुग्दापनी हत्यारा अझै पत्ता लागेन
हेमराजको हत्यामा माओवादी लडाकुको हात, नौ वर्ष पुग्दापनी हत्यारा अझै पत्ता लागेन
दाङ, । दाङका संचार उद्यमी देविप्रसाद धिताल हेमराजको हत्या भएको नौ बर्ष पुगिसक्यो । तर, उनको हत्या कसले र किन ग¥यो भन्ने प्रश्न अझैं अनुत्तरित छ । प्रहरीले हत्याराको पहिचान गर्नु त क्षितिज पारीको कुरा भइसक्यो, हत्यामा संलग्नहरुको स्पष्ट स्केचसम्म तयार गर्न सकेको छैन् ।
२०६७ साल साउन ६ गते संचार उद्यमी देविप्रसाद धिताल काँग्रेसको जिल्ला अधिबेसनका क्रममा साबिकको उरहरी गाविसमा पर्ने हेमनगरका गुरुप्रसाद शर्माको घरमा पुगेका थिए । उनको साथमा कान्तप्रसाद वली र घरधनी गुरुप्रसाद रेग्मी । हेमराज कहाँ छन् भन्ने स्वंय हेमराज, कान्तप्रसाद र गुरुप्रसाद बाहेक अरु कसैलाई थाहा थिएन । उनिहरु बिचकाँग्रेसको जिल्ला अबिधेसनका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफल चलिरहँदा नरेन्द्र बुढाथोकीको कान्तप्रसादलाई फोन गरेर लोकेशन मागेका थिए ।
नरेन्द्रसँग मोबाइलमा कुराकानी भएको केही समयमा कान्ताराम र हेमराज गुरुप्रसादको घरबाट निस्कीए । कान्ताराम सूर्ती गेटभित्र मिच्न थाले भने हेमराजले बाइक स्टार्ट गर्नथाले । हेमराज बाइकमा चढ्ने बित्तिकै उनिमाथी गोली बर्षाइयो । हेमराज त्यो दिन कहाँ छन ? भन्ने स्वयंम हेमराज,कान्ताराम र गुरुप्रसाद बाहेक अरु कसैलाई थाहा थिएन । त्यो भेटघाट अत्यन्त गोप्य थियो ।
गोप्य भेटघाट भइरहेको घरको गेटमा ढुकेर अपराधिक समूहल हेमराजको हत्या कसरी ग¥यो ? प्रश्न गम्भीर छ । हेमराज कहाँछन् भन्ने कुरा कान्तप्रसादलाई फोन गर्ने नरेन्द्र बुढाथोकीले थहाँ पाए । स्वंयम हेमराज,कान्ताराम र गुरुप्रसादसँगै हेमराजको लोकेशन थहाँ पाउने नरेन्द्र चौथो व्यक्ति हुन् । नरेन्द्रले लोकेशन मागेको केहीबेरपछी हेमराजमाथि गोली हानिएको छ । तर,प्रहरीले नरेन्द्रले किन लोकेशन मागे ? यसबिषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानकोे छैन् ।
गुरुप्रसादको घरको गेटमै गोली हानिएपछी हेमराज गेटभित्र जान खोजे । तर,गेट लगाएर उनलाई भित्र पस्न दिइएन । आफैले गेट बन्द गरेका गुरुप्रसादले भने आफूले गोली चलेको थाहा नपाएको दावी गर्छन् । प्रत्यक्षदर्शी उमा बस्नेतका अनुसार गेटभित्र पस्न नदिइएपछी हेमराज छेउमै रहेको घरतिर भागे । उनलाई अपराधिक समूहले लखेटी लखेटी गोली हानेर ढाल्यो । हेमराज त्यहीँ छट्पटाइरहे ।
हेमराजलाई गोली हानेपछी हत्याराहरु घटनास्थलमाट पूर्वतर्फ भागेका थिए । गोली लागेर छट्पटाइरहेका हेमराजलाई उपचारकालागि तुलसीपुर ल्याइदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भइसकेको थियो । उनको हत्या भएको सात बर्ष पुगिसक्यो तर,प्रहरी भने घटनामा संलग्नहरुको पहिचान गर्न सकिरहेको छैन् । परिवार भन्छ,‘हत्यामा देवराज,गुरुप्रसाद र कान्तारामको हात छ ।’
संचार उद्यमी हेमराज मारिएको नौ बर्षसम्म पनि प्रहरीले हत्याराको पहिचान गर्न नसक्दा उनको परिवारका सदस्यका आँखामा झरेका आँशु अझैँ ओभाएका छैनन् । स्वर्गीय हेमराजका भाई पुष्कर धितालका अनुसारहेमराजकोहत्यामा संलग्न भएको आरोपमा तुलसीपुर ११ नवलपुरका तुलसीराम विक उर्फ देवराज ठाकुरलाई पक्राऊ गर्न नेपालगञ्जमा रहेको उनको होटेल हंगेरीमा छापा हानेको थियो ।
तर, देवराज प्रहरीलाई झुक्याउँदै त्यहाँबाट भाग्न सफल भएका थिए । देवराज त्यहिबेला कपडा नै नलगाई टाबेल र गन्जीसँग भागेर इन्डिया पुगि आफूलाई फोन गरेको पुष्कर बताउँछन् । पुष्कर भन्छन्,‘दाइको हत्यामा कुनै न प्रकारले देवराजको हात छ । यदि हत्यामा संलग्न नभएको भए प्रहरीले पक्राऊ गर्न खोज्दा किन भाग्यो ?’
प्रहरीले छापामार्दा भाग्ने देवराजलाई पक्राऊगरी अनुसन्धान गरे हत्यारा पत्ता लाग्ने उनको भनाई छ । देवराज भारतीय व्यापारी निर्मलसिंह भंगुको घरका घरेलु कामदार हुँदा त्यहाँबाट दाङका केही युवाले हिरा मोती सहित केही नगद समेत चोरेर ल्याएपछी हेमराजले ती हिरामोती फिर्ता गराइदिएका थिए । हेमराज केही साथी र प्रहरीका साथ इन्डिया पुगेर उक्त हिरा मोती भंगुलाई बुझाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
३२ बर्षको उमेर श्रीमान् गुमाएकी हेमराजकी पत्नी मन्जु हेमराजको बारेमा कसैले सोध्दा भक्कानी हाल्छिन् । बोल्दा आँखाबाट आँशु बग्छ,गला अबरुद्ध हुन्छ । बोल्दा बोली बिचमै अडिन्छ । यस्तै अवस्थामा उनले जनता समाचारलाई प्रतिक्रिया दिंदै,‘प्रहरी आर्थिक प्रभाव र राजनीतिक दवाबमा परी आफ्ना श्रीमान्का हत्यारालाई पक्राऊ नगरेको दावी गरिन् ।’
भाइटिका आउन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा जेठो भाई गुमाएकी हेमराजकी दिदि पार्वता धिताल हत्यामा संलग्न भएको दावी सहित गुरुप्रसाद शर्मा र कान्तराम वली विरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा समेत प्रहरीले उनिहरुलाई पक्राऊ नगरी अपराधिको पक्षपोषण गरेको बताउँछीन् ।
यस्ता छन्, हत्याका कारण
तुलसीपुरका गुन्डा कब्जा गर्ने प्रतिष्पर्धा
भंगुसँग नजिक भई पैसा हत्याउने रहर
हेमराज त्यतिबेला सामूदायिक रेडियो तुलसीपुरका अध्यक्ष थिए । रेडियोको अध्यक्ष हुँदाहुँदै नेपाली काँग्रेसको महाधिबेशन प्रतिनिधी बन्ने योजनामा थिए । जानकारहरुका अनुसार उनि महाधिबेसन प्रतिनिधी बनेर दाङ काँग्रेसमा हावी हुने उनको भित्री मनोकांक्षा थियो । त्यतिबेलै उनको हत्या भयो । त्यतिबेला दाङमा टाइगर ग्रुपले श्रृखलावद्ध रुपमा अपराधिक घटना दोहो¥याइ रहन्थ्यो । कहिले व्यापारीसँग चन्दा आतंक त कहिले अपहरणदेखी व्यक्ति हत्यासम्म ।
हेमराज त्यहिबेला ठेक्कापट्टाको काम पनि गर्थे । तुलसीपुरस्थित १९ नम्बर बाहीनीको रासनको ठेक्का उनैलाई परेको थियो । टाइगर ग्रुपले सबै व्यापारी र ठेकेदारसँग तोकेरै चन्दा माग्थे । तर,टाइगर ग्रुपको निशानामा हेमराज कहिल्यै परेनन् । अनौपचारिक रुपमा प्रहरी अधिकारीहरु टाइगर ग्रुप संचालनमा उनको पनि हात थियो भन्छन् । उनी तुलसीपुरमा युवाहरुको समूहलाई हातमा लिएर ठेक्कापट्टा मिलाउने काम गर्थे । अझँ भनाँै तुलसीपुरमा एकछत्र राज चल्थ्यो उनको । हेमराज आफैँमा पैसावाल मान्छे थिए । त्यसमा पनि चोरी भएका बहुल्य हिरामोती फिर्ता गराइदिएपछी भारतीय व्यापारी निर्मलसिंहका विश्वास पात्र भइसकेका थिए । त्यसकारण पनि उनलाई पैसाको कुनै कमी थिएन ।
खुमबहादुर खड्का पावरमा थिए,उनि खुमबहादुरका दाहीने हात । खुमबहादुरको दाहीने हात भएकै कारण दाङमा प्रहरी,प्रशासनमा उनको राज चल्थ्यो । उनले कुनै कुरा सिफारिस गरेमा प्रहरीका हाकिमहरु हतपत उनको कुरा काट्न सक्दैनथे । कुटपीट र युवाहरुबीचको ग्याङवार उनि एककल फोनको भरमा मिलाउँथे । जसका कारण उनी तुलसीपुरमा सबैका ‘दाई’बनेका थिए । तर,खुमबहादुरसँग हेमराज निकट भएको उनका राजनीतिक प्रतिष्पर्धीलाई मन परेको थिएन ।
जानकारहरुका अनुसार टाइगर ग्रुपको संरक्षण गर्नेमा उनीसँगै तुलसीपुरका अरु व्यापारी र यातायात व्यसायी पनि थिए । उनीहरुसँग हेमराजको अघोषित टर्सल सुरु भइसकेको थियो । त्यहीँ टर्सलका कारण उनको हत्या गर्ने योजना बनेको थियो । प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार तीन समूहको स्वार्थ बाँधिएपछी हेमराजको हत्या गरिएको हो । यद्यपी प्रहरी अधिकारीहरु चेन अफ कमान्डका कारण औपचारिक रुपमा यो कुरा बोल्दैनन् । उनिहरुका अनुसार दाङमा खुमबहादुरको नजिक को बन्ने ? भन्ने राजीनितक प्रतिष्पर्धा,भारतीय व्यापारी निर्मलसिंह भंगुसँग को नजिक बन्ने ? भन्ने प्रतिष्पर्धा र तुलसीपुरका गुन्डा कसले कब्जा गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धाका कारण तीनवटै समूह मिलेर लामो योजना बनाएर उनको हत्या गरिएको हो ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल भने प्रहरी हेमराज हत्यारा पत्ता लगाउन लागिरहेको र अनुसन्धान नसकिएकाले केही भन्न नमिल्ने बताउँछन् । दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादु पाण्डेका अनुसार हेमराजको हत्यामा प्रयोग गरिएको हतियार अझैँसम्म प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन् । ‘उहाँको हत्या भएको स्थानमा फेला परेको गोलीको खोका हाम्रो ल्याबमा छ ।’उनले भने,‘तर, हत्यामा प्रयोग भएको हतियार बरामद भएको छैन् । त्यो हतियार अझैँ अपराधिक समुहसँगै छ ।’
अनुसन्धान जारी छ भन्नेसुरक्षा संयन्त्रको पुरानै रेडिमेट जवाफ हो । प्रहरीले मान्छे मारिएको नौबर्षसम्म पनि एकजना अभियुक्त पक्राऊ गर्न त परको कुरा हत्यामा संलग्नहरुको स्पष्ट स्केच सम्म तयार नगरी अनुसन्धान जारी भन्नु संसारको उत्कृट जोक बाहेक अरु केही हुन सक्दैन् । अहिले हेमराज हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले गरिरहेको छ । सीआइबी स्रोतका अनुसार यो घटनाको अनुसन्धान करिब अन्तिम चरणमा छ । सीआइबी हेमराजको हत्यामा तत्कालीन माओवादीका शीबिरमा रहेका लडाकु प्रयोग भएको निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
सीआइबीले हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा माओवादीका पूर्व लडाकुलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ समेत गरिसकेको छ । बिभिन्न कोणबाट अनुसन्धान अघी बढाएको सीआइबीको टोली हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न दाङ आएका बेला ती संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ पर्ने सूचना पाएर भागेका थिए । हेमराजको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सीआइबीको टोली आएको इप्रका तुलसीपुरलाई मात्रै थाँहा थियो । इप्रका तुलसीपुरले नै सीआइबीको टोलीलाई गाडीको बन्दोबस्त मिलाएको थियो ।
तैपनि हत्या अभियुक्त फरार हुनुले इप्रका तुलसीपुरमै कार्यरत प्रहरीले त अभियुक्त भगाएका होइनन् भन्ने आशंक सीआइबीलाई छ । त्यति मात्रै होइन्,सीआइबीलाई हेमराज हत्याका अभियुक्तलाई पक्राउ नगर्न पूर्व माओवादी र काँग्रेसका हाई प्रोफाइलका नेताले दवाब दिँदै आएको सीआइबी स्रोतको भनाई छ । सीआईबी एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार हेमराज हत्याको मुख्य योजनाकार काँग्रेस सम्वद्ध व्यक्ति हुन् । तत्कालीन समयमा माओवादी नेताहरुसँग राम्रो हिचमिच भएका उनले माओवादीका एक जिल्ला स्तरका नेतालाई ‘हेमराज’ले तपाईको हत्या गर्ने योजना बनाएका छन् ।
बिचार गर्नुस् भनेर त्रसीत पारेको र सोही त्रासका कारण ती माओवादी नेताले संग्रामस्थित लडाकु शीबीरबाट लडाकु ल्याएर हत्या गरेको निष्कर्षमा सीआइबी पुगेको उच्च प्रहरी अधिकारीले बताउँछन् । ती प्रहरी अधिकारीले हत्याको योजना बनाउने र हत्या गर्ने व्यक्तिको नाम भने खुलाएनन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार हेमराजको हत्यामा प्रयोग गरिएको हतियार अनमिनले प्रमाणिकरण गरेको हो । त्यो हतियार अहिले माओवादीले राज्यलाई बुझाइसकेकाले राज्यकै नियन्त्रणमा छ ।
हुन् तहेमराज पनि कुनै दुधले नुहाएका साधु थिएनन् । कोट्याउँदै जाने हो भने कहीँनेर उनमा पनि कालो दाग भेटिएला । यदि उनले अपराध गरेका थिए भने उनलाई कानूनको डोरीले बाँधेर कठघरमा उभ्याउनु पथ्र्यो । जुनसुकै बहानामा भएपनि हत्या गरिनु जघन्य अपराध हो । हेमराज हत्याकान्डका अपराधीलाई प्रहरीले पक्राऊ नगर्दा त्यसपछी दाङमा धेरै अपराध भएका छन् ।
गोरखा बोर्डिङको हत्याकान्ड,नारायणपुरमा भएको परिवारकै बंश बिनाश,मोतीपुरमा जुवाको खालमा हत्यार जसपुरमा रामबहादुरको हत्या जस्ता उदाहरण प्रस्शत छन् । यदि हेमराजका हत्यारालाई पक्राऊ गएिको भए अपराधिहरुको मनोबल घट्थ्यो र त्यस्ता किसीमका अपराधिक घटना दोहोरिने सम्भावना कम हुन्थ्यो । त्यसैलेप्रहरीले उनको हत्यामा संलग्न अपराधिहरुलाई कसैको दवाब र प्रभावमा नपरी कानुनको पासोमा बल्झाउन जरुरी छ ।